पहिरो पीडितलाई प्रदेश सरकारको रु. ५० हजार सहयोग – Sulsule
पहिरो पीडितलाई प्रदेश सरकारको रु. ५० हजार सहयोग
सुलसुले २०७७ भदौ ३१ गते १५:४३ मा प्रकाशित
बलेवा, भदौ ३१
बागलुङको जैमिनी नगरपालिकामा भदौ २८ र २९ गतेको पहिरामा परी ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत रकम प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले आज पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत प्रदान गरेको हो ।
पहिरामा परी ज्यान गुमाएका जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका लक्ष्मी पौडेल र हरिकृष्ण पौडेल तथा वडा नं. ५ बिनामारेकी जालपादेवी पौडेलको परिवारलाई प्रतिपरिवार रु. ५० हजारका दरले प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराएको हो ।
राससका अनुसार राहत प्रदान गर्दै मन्त्री चुमानले विपत्को सामना गर्न सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकारसँगको समन्वयमा विस्थापितको पुनर्वासका लागि पहल गरिने भन्दै उनले तत्कालको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।